Sunday 17th of October 2021 / 05:35:48 AM
सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक फोरम विजयी
सर्लाही, ५ असोज। सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक फोरम नेपाल विजयी भएको छ । विष्णु गाउँपालिकामा विजयी भएसगैं लोकतान्त्रिक फोरमले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा जितको खाता खोलेको छ ।
सिरहाकाे नवराजपुर गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेस विजयी
सिरहा, ५ असोज। सिरहाकाे नवराजपुर गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन । गाउँपालिका अध्यक्षमा नेेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार बिश्वमोहन यादवले २३८३ मत प्राप्त गरी विजय हासि
सप्तकोशी नगरपालिकामा एमालेको प्यानलै विजयी
सप्तरी,५ असोज । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा नेकपा एमाले प्यानल नै विजयी भएको छ । मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार उत्तम गौतमले ३०३९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । यस्तै उपमेयरमा पनि एमालेकी उम्मेदवार आ
रौतहटको परोहा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी
रौतहट, ५ असोज। रौतहटको परोहा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन । मेयरमा नेपाली कांग्रेसका शेख वकिल ६ हजार ४ सय मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका अरुण प्रसाद जैसवालले ४ हजार मत
१० बर्षभित्र रुकुमलाई बेरोजगार मुक्त जिल्ला बनाउने छौं :गृहमन्त्री शर्मा
अनलाइन दर्पण 2017-09-19
काठमाडौं ३ असोज । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले १० बर्षभित्र रुकुमलाई बेरोजगार मुक्त जिल्ला बनाईने उद्घोष गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा अखिल (क्रान्तिकारी) रुकुम–काठमाडौं सम्पर्क समितीद्वार
नेपाली कांग्रेसले ३३० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा जलपान गर्ने
काठमाडौं, ३ असोज। नेपाली कांग्रेसले दशैंको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रम प्रदेश तहमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि कांग्रेसले दशैंको कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन केन्द्रमा जलपान कार्यक्रम गर्दथ्यो ।
प्रजातान्त्रिक र देशभक्तीहरुले दिने साथ काे र कस्ताे ?
अनलाइन दर्पण 2017-09-17
नेपालकाे राजनैतिक घटनाहरुलार्इ नियाल्ने हाे भने अाज देश संसदबाद मान्ने र संसदबाद नमान्ने गरि दुर्इ ध्रुव तिर धकेलिएकाे देखिन्छ । संसदबाद मान्ने धारका पक्षधरहरु अाफ्नाे संरचनालार्इ बलियाे बनार्इ टिकि रहनकाे खातिर स्थानिय, प्रान
दलाल विरुद्ध जनप्रतिरोध निर्मम बन्छ : महासचिव विप्लव
अनलाइन दर्पण 2017-09-16
काठमाडौं , ३१ भदौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सामन्तवादी युगलाई पूँजीवादी युगले विस्थापीत गरे जस्तै यो दलाल पूँजिवादी युगलाईपनि समाजवादी युगले विस्थापित गर्ने बताएका छन् ।
चन्दले यो सं
फुट्यो नेपाली कांग्रेस, बन्यो नेपाली कांग्रेस (वी.पी.) पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस फुटेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवासँग असन्तुष्ट नेता झलकनाथ वाग्लेले पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी खोलेका हुन् ।
‘नेपाली कांग्रेस (वी.पी.)’ पार्टी नामको नयाँ दलको कार्यबहाक अधक्क्षमा वाग्ले छन् । यसैबीच
राप्रपा वैधानिकता विवाद वहस स्थगित
अनलाइन दर्पण 2017-09-11
काठमाडौं, २६ भदाै । राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकको बैधानिकताबारे अाज (सोमबार)का लागि सर्वोच्च अदालतले तोकेको बहस स्थगित भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई बोला
प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा पनि एमाले नै पहिलो पार्टी बन्छ : नेता पाण्डे
भक्तपुर, २१ भदौ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले नेकपा एमाले तेस्रो चरणको निर्वाचनका साथै प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी बन्ने बताउनु भएकाे छ ।
केपी ओली पुसमा फेरि प्रधानमन्त्री ! यस्तो छ एमालेको तयारी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी पुस महिनामा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईका अनुसार पुस महिनामा एमालेको बहुमतको सरकार बन्ने र त्यो ओलीको नेतृत्वमा हुने
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्धारा वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
अनलाइन दर्पण 2017-09-02
काठमाडौं, १७ भदाै । भाेजपुर जिल्लाकाे षडानन्द नगरपालिकाकाे वडा नं २ को कार्यलयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले तालावन्दी गरेका छन ।
वडा सचिबले कानुन बिपरित काम गरी ०७३/७४ को बजेट फरफरा
अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा रन्जित तामाङ बिजयी
अनलाइन दर्पण 2017-09-01
काठमाडौं । माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्वकाे लागि भएको निर्वाचनमा रन्जित तामाङ अध्यक्ष पदमा बिजयी भएका छन । कुल खसेको मत मध्य बिजयी ले तामाङले थोरै मात्र बढी मत प्राप्त गरेका छन भने उनका प्रतिस्पर्धी अ
यस्ताे विवादमा पनि फस्ने हाे काँग्रेस ?
काठमाडौं, १४ भदाै । नेपालकाे राजनीतिक घट्ना क्रमका एक अटल खम्वाकाे रुपमा अाफुलार्इ सधै उभ्याउन सफल पार्टी नेपाली काँग्रेस यतिवेला ठुलाे दुर्घटनाकाे विवादमा फसेकाे छ ।
भ्रष्टचारको दोषी व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउ
अखिल(क्रान्तिकारी) काे सम्मेलनमा किन सरी माग्दै बाहिरिए महासचिव?
अनलाइन दर्पण 2017-08-29
काठमाण्डाै, १३ भदाै । नेकपा माअाेवादी केन्द्र निकट अखिल(क्रान्तिकारी)काे राष्ट्रिय सम्मेलन भदाै ७ बाट चलिरहेकाे छ । केन्द्रिय पदाधिकारीकाे लागि सहमति नजुटेपछि १४ गते बुधवार माओवादी पार्टीकै इतिहासमा पहिलो पटक अखिल(क्रान्तिकारी)काे नेतृत्
'२ नं प्रदेश एमालेको जन्मभूमि हो, यहाँ पनि एमाले पहिलो पार्टी बन्छ': गाैतम
अनलाइन दर्पण 2017-08-26
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले २ नं प्रदेश एमालेको जन्ममूभि भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँ पनि एमाले सजिलै पहिलो पार्टी बन्ने दावी गरेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित जनवर्गीय संगठनको अगुव
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतमा कांग्रेसको प्यानल नै विजयी
अनलाइन दर्पण 2017-08-07
सुर्खेत, २३ साउन । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतमा नेपाली कांग्रेसको प्यानलले नै जीत हासिल गरेको छ । एमालेका उम्मेद्वारहरुर्लाइ पराजित गर्दै कांग्रेसले जिल्ला समन्वय समितिमा एकलौटी रुपमा बाजी मारेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरमा एमाले बिजयी
अनलाइन दर्पण 2017-08-06
भक्तपुर, २२ साउन । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरमा नेकपा एमालेको प्यानलनै बिजयी भएको छ । नेमकिपाका उम्मेद्वारहरुर्लाइ पराजित गर्दै एमालेले जिल्ला समन्वय समितिमा जित हासिल गरेको हो ।
नौ सदस्यीय समितिका लागि भएक
साढे ४ सय बिप्लब कार्यकर्ताद्धारा पार्टी परित्याग
भक्तपुर, २२ साउन । बिप्लवले नेतृत्वको नेपाल कम्यूनिष्ट पाटीका ४ सय ५० जना नेता तथा कार्यकर्ताहरुले संयुक्त रुपमा आज आइतबार पाटी परित्याग गरेका छन् ।
रफत सञ्चार क्लवमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनीहरुले संयुक्त रुपमा पाटी परित्याग